Randrianasolo Jean Nicolas "Tena mandripaka olona maro ny tazomoka aty Betroka"
Raha variana amin'ny ady atao amin'ny tsimokaretina coronavirus miainga ao an-drenivohitr'i Madagasikara ny fitondrana foibe Malagasy ankehitriny ary tena rariny tanteraka izany, hoy ny depioten'i Madagasikara Randrianasolo Jean Nicolas,
dia misoko mangina mandripaka olona maro kosa aty amin'ny distrikan'i Betroka aty ny tazomoka mahery. Efa maro dia maro tokoa ankehitriny ny lavon'ity aretina iray ity, hoy izy, fa efa manodidina ny 70 isa any ho any ary ny mampalahelo dia saika zaza madinika avokoa ny ankamoroany tamin'izy ireo. Ny mampalahelo anefa, hoy hatrany ity depiote ity tamin'ny firesadresahana an-telefaonina taminay, dia tena miraviravy tanana ireo tompon'andraikitry ny fahasalamana aty amin'ity distrika misy anay ity noho ny tsy mbola namalian'ny minisitera mpiahy ny fangatahana nataonay efa hatramin'ny 3 volana lasa izao ny mba handefasana fanafody sy fitaovana hoenti-misedra an'io aretina io. Koa dia manaitra ny sain'io minisitera tompon'andraikitry ny fahasalamam-bahoaka io sy ny fitondram-panjakana foibe ihany koa mba hanara-maso sy hijery ifotony ny zava-misy aty Betroka aty fa mijaly ny vahoaka. Azo antoka fa hanana izay ho ambarany tokoa ity depiote voafidy avy any amin'ny distrikan'i Betroka ity rehefa mby tonga eto Iarivo hiatrika ny fivoriana ara-potoana voalohan'ny parlemantera Malagasy taona 2020 tontosaina amin'ity fiandohan'ny volana mey ity.